Ejipta · Oktobra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Ejipta · Oktobra, 2018
Tantara mikasika ny Ejipta tamin'ny Oktobra, 2018
Lalàna 28 Oktobra 2018
Taorian'ny volana maro niandrasana sy ireo sahoan-dresaka, azo ihany ny rariny tao anatina tantara Ejiptiana izay nisy mpamily iray voalely am-body sy nampijalian'ny polisy - izay naka an-dahatsary ny heloka bevavan'izy ireo mba hanalàna baraka kokoa ny olona nampijaliany. (Fanamarihana avy amin'ny mpamoaka lahatsoratra: miala tsiny amin'izay tohina amin'ilay teny somary mivantambantana etsy ambony fa tsy hita izay teny malagasy mahalaza azy manokana, ka dia ny famaritana avy hatrany no natolotra anao mpamaky). Mitondra amintsika ny vaovao farany avy amin'ny tontolon'ny blaogy Ejiptiana mikasika ilay raharaha i Eman Abd Al Rahman.
Fahalalahàna miteny 26 Oktobra 2018
Koety 21 Oktobra 2018
Fahalalahàna miteny 20 Oktobra 2018
Navotsotra i Abdolkarim
Fahalalahàna miteny 19 Oktobra 2018
Navotsotra i Abdolkarim taorian'ny 18 andro nigadrana.
Vehivavy Ejiptiana iray novonoina tao amin’ny fitsarana Alemà noho ny fanaovam-boaly
Alemaina 08 Oktobra 2018
Efa ela izay ireo bilaogera Ejipsiana no tsy niara-niombon-kevitra. Saingy ilay heloka feno fankahalana niseho farany tany Alemaina momba ilay vehivavy Ejipsiana Miozolomana iray, Marwa El Sherbini, no nahafahan’izy ireo nihaona indray sy nanameloka ireo fampahalalam-baovao iraisam-pirenena, izay ninia tsy nijery ny toe-javatra niseho tamin’ireo Miozolomana any Andrefana.
Palestina 04 Oktobra 2018